भारतले सोध्यो- चीनसँगको सम्झौताले रक्सौल-वीरगञ्ज नाका कसरी खुल्छ ? - inaruwaonline.com
भारतले सोध्यो- चीनसँगको सम्झौताले रक्सौल-वीरगञ्ज नाका कसरी खुल्छ ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक १३, २०७२ समय: १२:०२:३१
१३ कात्तिक, काठमाडौं । इन्धन आपूर्तिका लागि नेपालले चीनसँग गरेको सम्झौताबारे दक्षिणी छिमेकी भारत सरकारले आफ्नो कडा धारणा सार्वजनिक गरेको छ । उसले हाल रोकिएको रक्सौल-वीरगञ्ज नाका चीनसँगको सम्झौताले कसरी खुल्छ भनेर प्रश्न गरेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पत्रकाहरुले नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताबारे प्रश्न गरेका थिए ।
उनले नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताबारे आफूहरु जानकार रहेको बताए । उनले नेपालले भारतबाट आपूर्ति गर्ने इन्धनमध्ये ७० प्रतिशत रक्सौल-वीरगञ्ज नाकाबाट जाने र त्यो नेपाली सीमामा भएको आन्दोलनले सो नाका बन्द रहेको बताए ।
नेपालको एक क्षेत्र र जनसंख्याको एक हिस्सा संविधानसँग सहमत नभएको र उनीहरुले भारतबाट हुने सप्लाइ रोकेको भन्दै प्रवक्ता विकासले भने- त्यो सम्झौताले रक्सौल-वीरगञ्ज खुल्न कसरी सहयोग गर्छ, हेर्नु पर्नेछ ।’
नेपालमा चीनको प्रवेशले भारतको प्रभाव घट्दैन भन्ने प्रश्नमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले नेपल-भारत सम्वन्ध सहगोगमा निर्भर नरहेको बताए ।
उनले भने-‘दुई देशबीच रोटी बेटीको सम्वन्ध छ । खुला सीमा छ र ऐतिहासिक सम्वन्ध छ ।’ अहिलेको समस्या नेपालतर्फकै भएको भन्दै उनले यो छिट्टै समाधान हुने र दुई देशको सम्वन्ध पुरानै अवस्थामा फर्कने अपक्षा रहेको बताए ।
तर, नेपालमा भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट बढेको भारतको चासो रहेको उनले बताए ।अनलाइनखबरबाट